तीजैमा नाचौ छमछम भन्दै छन् यी दुइ वर्षा !
काठमाडौँ - फिल्म नाई नभन्नु ल कै सेरिज मार्फत डेब्यु गरेकोले पनि हुन् सक्छ , वर्षा राउत र वर्षा शिवाकोटीको चर्चा राम्रै हुने गर्छ । यी दुईलाई लिएर विभिन्न चर्चा समेत हुने गर्छन फिल्मनगरीमा । यी दुईलाई केहि फिल्ममा संगै अभिनय गराउने निर्माता तथा निर्देशकको चाहना पनि थियो तर आपसी सम्बन्ध राम्रो नरहेको हल्लाकै भरमा यी दुइलाई प्रस्ताव नै भएँन ।
यसरि फिल्ममा नदेखिएको यो जोडी गीतमा भने संगै देखिएका छन् । आउदो तीजलाई लक्षित गर्दै गायिका सिन्धु मल्लले झन्डै ५ बर्षपछी तयार पारेको गीतको भिडियोमा सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक सुव्रत आचार्यले दुई वर्षालाई पहिलो पटकसंगै अभिनय गराएका हुन् । राजकुमार बगरको शब्द तथा सुदाम थापाको संगीत रहेको यस गीतमा आउदै गरेको तीजको चर्चा गरिएको छ ।
अहिलेको तीजैमा नाचौ छमछम बोलको यस गीतमा दुइ वर्षालाई नचाउने काम भने नृत्य निर्देशक गम्भीर विष्टले गरेका छन् । तर गीतमा किन दुइ वर्षानै राखियो त ? यस जिज्ञासामा भिडियो निर्देशक आचार्य भन्छन – मैले यी दुई वर्षालाई नै नजिकबाट चिनेको छु र मलाइ लग्यो पछिल्लो समय फैलिएको हल्लालाई असत्य पनि सावित गर्नु पर्छ र मैले दुई वर्षालाई नै अफर गरे ।
त्यसो त संगै देखिदा दुवै वर्षा पनि निकै खुसि थिए । हाम्रो बीचमा केहि थिएँ तर हल्ला बढी भयो शिवाकोटीले भनिन हाम्रो सम्बन्धलाई अनुमानकै भरमा हल्लामा ल्याइयो ।
यता राउत पनि संगै काम गर्न पाउदा निकै खुसि लागेको बताउछिन । हामीलाई पनि संगै काम गर्ने इच्छा थियो तर अफर आउथेन उनले कारण बल्ल बुझेको बताउदै भनिन । यसैगरी गायिका मल्ल पनि आफुले केहि ग्यापमा ल्याएको गीतले पहिले झैँ माया पाउनेमा विश्वस्त छिन ।
केहि समय मैले मेरो घर गृहस्तीलाई दिए किनकी परिवारको दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्छ नै अब फेरी बिस्तारै आफ्नै गीत लिएर आउदैछु गायिका मल्लले निरन्तरता दिने खुलाइन । गीतमा छायाँकन अर्जुन तिवारी र टीमको रहेको छ भने यसलाई भरत रेग्मीले सम्पादन गरेका हुन् । साप्ताहिक
सिन्डिकेटलाई सरकारकै साथ
सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ। एक वर्षअघि कानुन आयोग र आपुर्ती मन्त्रालयले बनाए ...
दक्षिण कोरियाको सिनाम पार्क अहिले संसारभर चर्चामा रहेको छ । झट्ट हेर्दा निकै अनौठो लाग्ने उक्त पार्कमा लिंगको आकृतिमा ढालिएका अलग ...